South Africa Xhosa Umbala omgangatho ophezulu we-aluminium obunobumba obunamehlo ophahleni ophahlayo uphahla lwendawo yokupaka okwenza intengo yomatshini
Ishicilelo esenziwe ngombala ogqwetshiwe sinobukeka obuhle kunye nombala oqaqambileyo. Iyasetyenziswa ngokubanzi kwintsimi, i-factory, i-resort, ihotele, ihholo lemiboniso, i-vacationland, izakhiwo zamandulo nezakhiwo zanamhlanje.
Umshini ogqityiweyo ogqitywe ngombala owenziwe ngomshini wokumisa umatshini uthengisa kakhulu ukuthengiswa kumazwe amaninzi. Bathanda iphepha eliphazamisekileyo lokubhaka kwebala elikhutshwe ngophawu lokuhlalisa indlu.
Umbala oqhelekileyo ogqwetswe ngombala ogqwetshiwe ngaphambi kokuba uqalise i-coil ingama-1250mm, izinto ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwe-steel galvanized steel PPGI.
Umgca ogqityiweyo ogqitywe ngombala ogqityiweyo wokupakisha umgca wokufaka umatshini wokufaka umatshini uquka i-decoiler, umshini wokumisa umqulu, inkqubo yolawulo lwekhompyutheni kunye nokusetyenziswa kwetafile.
IINKCUKACHA ZENGCACISO ZENGCACISO ZISEBENZA UKUFUNA KWI-WEBSITE YETHU
Ukwamkeleka ngokwamkelekileyo, ukuba awufumani iimfuno zakho kwiiwebhusayithi yethu, nceda undibonise umdwebo wakho wesidingo, apha iqela liyidibanise kwaye lizokunika impendulo eyanelisayo.